Tsy fanarahan-dalàna : nakatona ny tranombarotra Globe etsy Behoririka | NewsMada
Tsy fanarahan-dalàna : nakatona ny tranombarotra Globe etsy Behoririka
Nanapa-kevitra ny kaominin’Antananarivo hanakatona ny toeram-pivarotana Globe etsy Behoririka omaly. Tsy manara-dalàna ary tsy nahazo fahazoan-dalana hisokatra velively ity tsenabe ahitana entana sinoa ity.
Tsy ara-dalàna ny rafitry ny trano. Mampitaraina ny mponina manodidina ny rano maloto avoakan’ny trano fivarotan vokatr’io rafitra tsy arifomba io. Tsy zakan’ny trano eny amin’ny manodidina ihany koa ny vesatr’ity tranobe ity ka mampitriatra ny tranon’ny mponina sasany eny amin’ny manodidina.
Fanazavana nentin’ny tompon’andraikitry ny kaominina ireo. Tsy maintsy hakatona araka izany ity toerana ity satria sady tsy manara-dalàna no ahina hitera-doza ho an’ny mpiantsena sy ny mpivarotra anjatony ao.
Efa nanome fampitandremana maromaro ny kaominina tany am-piandohan’ny fanorenana ny trano saingy nikiry namita izany ihany ny tompon’ny trano. Nampiantsoana ny tompon’ny trano tamin’ny taon-dasa ary nanao fanekena fa hanaiky hampitsahatra ny fanorenana ary hanao fangatahana fahazoan-dalana fanorenana. Herintaona aty aoriana, niziriziry tamin’ny heviny ny tompon-trano ary nanohy ny asa fanorenana ary nanao ho tsy rafesi-mandidy.
Ireo no antony nandraisan’ny kaominina ny fanapahan-kevitra hanakatona tanteraka ny tsenam-barotra. Mbola betsaka ny fanamboarana tsy maintsy hatao ary misy ny rindrina mavesatra tsy maintsy harodana vao mahazo miverina misokatra indray nity tsenabe Globe ity.
Mipoitra tsikelikely ny tsy fanarahan-dalana amin’ny fanorenana ireo tranobe miezinezina eto Antananarivo. Manaporofo izany fa betsaka ny lalana ambanin’ny tany nataon’ireo mpanambola ka nanorina antsokosoko ireny trano lehibe tsy manara-penitra ireny.